Author: Vishicage Tygokinos
Qodobka aad-Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha. Xisbiyada siyaasadda Xiriirka Dibadda Baasaboor.
Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo shalay ka hadlay magaalada Kismaayo ayaa nasiib darro ku tilmaamay isqabqabsiga dalka ka jira. Dowlad goboleedyo cusub ayaa laga dhisi karaa dhulka ku yaala jamhuuriyada gudaheeda markii ay daruufo jiraan.
Waxaa dhacday hadda ka hor in nin Hindi ah oo Deganaasho ku leh Dubay iyo Nayroobi uu sameeyo Baasabooro Soomaali ah taasoo fadeexad ku noqotay Laanta socdaalka Soomaaliya. Guddiga Xorta ah ee Dastuurka Federaaliga wuxuu bixinayaa saddex ikhtiyaar oo la kala dooran karo: Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka.
Isfaham darada mararka qaar soo kala dhexgasha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waa mid aad u qoto dheer oo soo jiitamayay muddo soomaaliyw. Cutubka 5aad Dhul, Hanti iyo Degaan.
Dawladda Federaalka Soomaaliya Af-Carabi: Qodobka 99aad-Madaxweyne-Ku-Xigeenka Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen dastuukra madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha.
Waxa uu ku baaqay in uu Kismaayo ku fidinayo gogol la’isugu keenayo madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada si loo turxaan bixiyo madmadoowga soo baxay. Xaaf markii uu garoonka Cadaado kasoo dagayay waxaa loosoo dhaweeyay si aanan horay loo arag, soomaapiya hareertiisa ka muuqday guddoomiye ku federsalka baarlamaanka Galmudug oo ahaa ninkii shir guddoomiyay kullankii baarlamaanka ee xilka looga qaaday madaxweynihii hore Cabdikariim Xuseen Guuleed. Waxaa laga keenay ” https: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa madaxa Qaranka iyo dastuur,a, waana astaanta midnimada Qaranka.
Waxaanu doonaynaa in xiriirka la hagaajiyo”, ayuu yiri xildhibaan Zakariye. Ciidamada Soomaaliya waxay ahaayeen ciidanka ugu xoogan qaarada afrika Afrikada Madoowmarka laga eego Baaxadiisa iyo lacagta ku bixi jirtay iyo qalabka uu watay.
Waxaa jiray shirar is daba joog ah oo ay yeelanayeen golaha wasiirada Galmudug oo la doonayo in lagu xaliyo khilaafka ka dhaxeeya hoggaanka maamulka sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka warfaafinta Galmudug Maxamuud Aadan Cusmaan Masagawaa. Madaxweynuhu wuxuu iscasilaadiisa u gudbinayaa Golaha Shacbiga isagoo sii marsiinaya Afhayeenka Golaha Shacbiga. Governo federale della Somalia ; Af-Ingiriis: Arrintaas ayaa hadda si rami ah u dhacday kadib markii xildhibaano ay mooshin ka gudbiyeen Safiirka imaaraatka carabta ee Soomaaliya u jooga, oo ay ku eedeeyeen in uu farogalinayo arrimaha gudaha ee Soomaaliya.
Dastuurka Qabyada ah wuxuu siinayaa dowlada federaalka in tilaabooyin maamul ay qaado markii dowlad goboleed ay dabacsan tahay ama ay u dhaqmeyso si lidi ku ah dastuurka. Nidaamka Federaaliga ah qeyb kama uusan ahayn qorshihii hore ee Soomaaliya markii laga asaasayay midoobidii dhulalkii ay kala gumaysan jireen Ingiriiska iyo Talyaaniga.
Qaybaha kale Xisbiyada siyaasadda Xiriirka Dibadda Baasaboor. Qodobka aad-Dhaarta Wasiirada Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga.
Cutubka 14aad Maaliyadda Guud. Qodobka aad-Muddada Xaafiiska Madaxweynaha iyo Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo dsatuurka oo midkiiba uu yahay 5 sano.
Mid ka mid ah waa Somaliland oo gooni isu taagtay sheegatayna in ay tahay jamhuuriyad madax bannaan. Ma ogin in dowladdiisu ku ogtahay iyo inkale.
Kadib markii lasoo xulay Xubnaha Baarlamaanka Ayeey waxay doorteen Gudoomiyaha Baarlamaanka ama Afhayeen, waxay markale duurteen Madaxweyne oo isgana sii xushay Raiisul wasaare, Sidaas ay dawladdu ku tahay Baarlamaani oo wax walba Baarlamaanka ayaa soo go’aaminaya.
Inta uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku xusan sharciga, waxaana lagu hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare dadweynuhu joogaanwaxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamaada Dastuuriga. Badmareenka Soomaalida Ciidanka Xoogga.